Nchịkọta ọrụ na ọzụzụ - Anshun AKF Medical Technology Co., Ltd.
Biko zighachi mmalite gị na: Ọrụ @ runbo.net Na-egosi ọnọdụ ahụ:
Online Ahịa Service:
1. Na-elekwasị anya na nkwukọrịta oge dị n'ịntanetị iji kwado nkwekọrịta nkwekọrịta
2. Iji otutu ọrụ ụzọ ozugbo ijere ndị ọrụ na-edozi nsogbu nke ndị ọrụ na-eji ngwaahịa.
3. Colnakọta mkpa onye ọrụ, na-enyere ngalaba ọ bụla aka ịkwalite ọrụ ngwaahịa yana imecha nkwalite ahịa.
4. Ijikwa mkpesa ndị ahịa yana ịbawanye nkwụsi ike ndị ahịa.
5. zingtụle onye ọrụ data na Optimising na-arụ ọrụ ihe ngwọta.
6. Kwere na-arụ ọrụ mgbanwe usoro.
Ihe ndi choro:
1. Type ọsọ kwesịrị karịrị 80 okwu / min (na-ege ntị na dee)
2. thehụ Internetntanetị na ịnwe ụfọdụ ihe ọmụma bụ isi nke ngwa netwọkụ.
3. Ogo mmụta mahadum ma ọ bụ karịa, kọmpụta, e-azụmahịa, wdg.
4. ingmasị isoro ndị mmadụ kwukọrịta na ibute nrụgide nke nkwukọrịta
5. Ahịa ahịa metụtara ọrụ ahụmahụ na-họọrọ.
Ihe ndị mmadụ chọrọ:
1. Ezigbo ikike nke ijikwa ihe na ịmụ ihe ọmụma ọhụụ;
2. Nwee ezigbo na ntị, nghọta na inwe nghọta ọrụ;
3. attention Paya ntị na nkọwa, inwe ikike siri ike nke mmụta onwe onye na ịdọ aka na ntị onwe onye.
4. Inwe mmụọ dị mma otu, imeghari ọnọdụ ọrụ ọsọ ọsọ;
5. industryhụ ụlọ ọrụ na-ahụ n'anya ma na-achọpụta uru ọrụ bara.
Onye nchịkọta akụkọ webụsaịtị:
1. Ọ bụ ọrụ maka ide ụdị edemede dị iche iche, nkwupụta, ihe ọhaneze na nchịkọta nke weebụsaịtị
2. Resprụ ọrụ maka mkpokọta nke ihe nrụọrụ weebụ, ihe odide ederede na
Emechaa ederede ederede, nkwenye na ọrụ ndị ọzọ:
3. Itinye aka na mmepe, atumatu na nlegide anya nke usoro nkwalite webusaiti na atumatu.
1. Isi na akwụkwọ akụkọ, nkwukọrịta, Chinese, akụnụba na njikwa, yana agụmakwụkwọ agụmakwụkwọ kwesịrị ịbụ nzere bachelọ ma ọ bụ karịa.
2. Buru ibu maka mkpoko nke ihe omuma webusaiti, edemede odide na ighari ederede ozo, nkwenye, wdg;
3. iliarma ama usoro ndị ọkachamara, iche echiche ọsọ ọsọ, nghọta siri ike, nka ederede siri ike, ikike ikwu okwu asụsụ siri ike.
4. -enwe ike dee nnomi nkwado nnomi,
na ahụmịhe ọrụ na weebụsaịtị na magazin.
Ndị ọrụ ọzụzụ:
Soro usoro mmepe usoro nke ụlọ ọrụ AKF, Na-agbaso mkpa nke mmepe azụmaahịa, Na-enyocha ọgbaghara ikike dị iche iche yana usoro mmepe ndị ọrụ dị iche iche, na-ewu usoro ọzụzụ ndị ọrụ iji kwado mmepe azụmaahịa ngwa ngwa, yana inyere ndị ọrụ aka ịmalite ọrụ site na iche iche na mufti-akụkụ ọzụzụ.
Ulatingmepụta usoro nhazi maka agụmakwụkwọ na ọzụzụ ndị ọrụ, yana ịhazi usoro nhazi na mmụta sayensị nke usoro ọrụ na ọzụzụ. Mezue mmezigharị na ojiji nke ego ọzụzụ dịka usoro iwu si dị. A na-eji ego na akụnụba eme ihe n'ụzọ zuru oke. A na-ahụta agụmakwụkwọ na ọzụzụ nke ndị ọrụ dị ka akparamagwa omume nke ụlọ ọrụ ahụ, a na-azụlitekwa ụlọ ọrụ ahụ na nzukọ mmụta.
Gbasawanye ọwa nke ọzụzụ onyinye iji gboo mkpa nke mmụta na-aga n'ihu nke ndị ọkachamara na teknụzụ, yana inye nkwado ọgụgụ isi maka mmepe nke ndị ọrụ nwere ike inweta ebumnuche mmepe mmepe AKF.
Hazi na oke, na-etinye nrụgide na isi ihe:
Na-ekwusi ike na ịzụlite ikike dị elu na talent ndị ọhụrụ. A na-anakwere ogige ọzụzụ iji zụlite ma wuo ezi uche n'ime nka.
Na-emechi azụmahịa, Payaa ntị na nsonaazụ n'ezie, Ọzụzụ ndị ọrụ dị nso na atụmatụ ụlọ ọrụ, Na-ekwusi ike na nkwado nke ọzụzụ maka azụmaahịa ụlọ ọrụ, Na-ejikọ tiori na omume, Na-elekwasị anya na itinye ya n'ọrụ na mmetụta ọ rụpụtara.
Ndị Ọzụzụ Ndị Ọrụ:
Ekike echekwabara: Nlekọta Ndị Ọrụ zuru ezu
Ọzụzụ ọkachamara ọkachamara: Echebere ọdọ mmiri nke njikwa ihe
Edebere ọdọ mmiri nke njikwa etiti
Echekwala talent ọdọ mmiri maka nlekọta ndị isi
Nka na ụzụ ọrụ mmepe ：
Ndị Ọkachamara ：
Ndị ọrụ ọrụ:
Developmentzọ Mmepe Ọrụ:
Onye na-ere ahia n’etiti onye na-ere ahịa nke dị nta Junior nwoke na-ere ahịa oge niile
Ndị Ọrụ Mgbapụ:
Developmentzọ mmepe ọrụ nlekọta: Onye osote onye isi njikwa onye isi oche nke etiti / Chief Inspector Region / Supervisor Regional Manager na-echekwa onye nlekọta 60 ọnwa 36 ọnwa 24 ọnwa 12 ọnwa 0-6 ọnwa